Zimbabwe: Why Zim Needs to Diversify Economy - allAfrica.com
opinion By Tatira Zwinoira
These figures were from its April 2019 World Economic Outlook (WEO) report where the Bretton Woods institution had projected sub-Saharan Africa's economic growth to be 3.5% and 3.7% for 2019 and 2020, respectively.
The IMF projected that Zimbabwe's economy would contract by 7.1% by yearend before rebounding by 2.7% next year.
Ncube has used agriculture as a key growth driver as the sector plays a key role in Zimbabwe, contributing 11% to the total gross domestic product (GDP) and is the main source of livelihoods for around 67% of the country's population.
According to the Agriculture Survey 2019, whose results were released early this year, 70% of Zimbabwe's population is directly dependent on agriculture with supplies from this sector contributing the bulk of raw materials to manufacturing.
And, if this revelation is taken alongside a book by the National Research Council, titled 'Climate Stabilisation Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia', 2011, the world will face severe consequences from these temperatures.
These drops could significantly reduce returns from Zimbabwe's minerals such as gold, diamonds, and platinum.